Faminaniana sy fironana momba ny varotra eo an-toerana 2020 Martech Zone
Rehefa mitohy ny fanavaozana sy ny fampifandraisana ny teknolojia, mitombo hatrany ny fahafaha-mirary ho an'ny orinasa eo an-toerana hananganana fahatsiarovan-tena, ho hita, ary hivarotra an-tserasera. Ireto misy fironana 6 hambarako mialoha fa hisy fiatraikany lehibe amin'ny 2020.
Ho lasa fikarohana vaovao i Google Maps
Amin'ny taona 2020, fikarohana momba ny mpanjifa maro kokoa no hipoitra avy amin'ny Google Maps. Raha ny tena izy dia antenao ny isan'ny mpanjifa mihamitombo hanalavitra ny fikarohana Google tanteraka ary hampiasa ny fampiharana Google amin'ny findainy (ie Google Maps) hitady valiny amin'ny fanontaniany. Ho fanampin'izay, ny mpanjifa mampiasa ny fikarohana ao amin'ny Google dia hahita ohatra misimisy kokoa momba ny fikarohana ny vokatra mamerina valin'ny saritany. Ohatra, mitady AirPods mety hanome ny lisitra Apple Store, Best Buy ary Target map misy an ao amin'ny staoky marika mandeha amin'ny alàlan'ny Ads inventory eo an-toerana an'i Google.
AI Hanomboka hieritreritra toa anao
Mirongatra ny karoka soso-kevitra satria lasa nihatsara sy nalalaka kokoa ny teknolojia AI. Tsy mila mieritreritra ny lojika amin'ny fahazoana miasa intsony ny mpanjifa, ny fanaovana asa aman-draharaha na ny fanaovana dia lavitra - ny rindrambaiko mivoatra dia dingana iray mialoha ny filan'ny mpanjifa sy ny filany.
Fikarohana Zero-Click amin'ny Uptick
Google valin'ny fikarohana tsindrio aotra hanohy hampihena ny filan'ny mpanjifa mitsidika tranonkala hafa raha mila fanazavana. Miaraka amin'ny valiny eo noho eo, Map Packs, mpandika teny, tontonana fahalalana, calculatera ary famaritana nasongadina eo an-tampon'ny pejy, Google dia hametra ny mpanjifa amin'ny SERP, hanamafy ny anjara asany amin'ny maha- king of data. Manantena ihany koa fa hahita valiny ambony manankarena toy ny torolàlana, ny fomba fahandro, ny fomba fanao, ny menus ary maro hafa izay ahitana sary, horonan-tsary ary atiny manankarena hafa.
Ny vokany Amazon
Raha / rehefa manomboka manaisotra pejy ao amin'ny bokin'i Google i Amazon, dia hanome hery ireo mpividy sy mpivarotra mba hifehezana indray ny mombamomba ny orinasa, ny lazany ary ny angon-drakitra avy hatrany amin'ny tranokalan'i Amazon. Na dia hita fotsiny aza ho toy ny tranokala e-commerce, ny fividianana Amazon's Whole Foods Market farany teo dia mampiseho ny fanitarana azy ho amin'ny tsanganana samihafa miaraka amin'ny fahaiza-manao vaovao. Andraso ny fisondrotan'ireo ezaka ireo amin'ny taona 2020.
Mbola tsy maty ny biriky sy ny mortara
Miverina indray ny biriky sy ny rihitra, saingy amin'ny fomba hafa noho izay andrasan'ny olona iray. Satria ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny marika dia avy amin'ny magazay ara-batana, dia hanohy hamorona indray ny tenany izy ireo hanintona ny fitakian'ny mpanjifa amin'ny fanaovana nomerika sy ny fanamorana. Amin'ny taona 2020, andraso ny fivarotana biriky sy rihitra sy trano fisakafoanana hampihena ny toerana misy azy ireo, mifantoka amin'ny foto-kevitra niainana izay hamela fiantraikany amin'ny mpanjifa ary hanampy azy ireo hiavaka amin'ny fifaninanana.
Ny etika, ny fiainana manokana ary ny hevitry ny besinimaro dia hisy vokany eo amin'ny orinasa
Na misy izany vaovao diso na ny vokatra CBD, ireo sehatra teknolojia lehibe toa ny Youtube sy Facebook dia tsy maintsy mifidy lafiny iray raha ny amin'ny famelana, fampiroboroboana na fanekena orinasa, fampielezan-kevitra na vokatra. Miaraka amin'ny fahefana hanovana ny algorithman amin'ny lisitra, hampitombo ny sivana ary / na hampiroborobo ny vokatra / hevitra sasany amin'ny hafa, ireo mpiara-miasa amin'ny teknolojia ireo dia mila mandinika akaiky ny anjara andraikiny amin'ny fanaparitahana vaovao - na diso na mampiady hevitra - ary ny vokany eo amin'ny mpanjifa. . Toy izany koa, ny taona 2020 dia hahita ireo orinasa teknolojia lehibe manala endrika bebe kokoa mifototra amin'ny fiainana manokana - toy ny fomba fampidirana Google Maps vaovao - hamerana ny fizarana ny angon-drakitry ny mpanjifa amin'ny marika ho ezaka hiarovana ny tsiambaratelon'ny mpanjifa.
Tags: famaritanaetikavaovao disogoogle apsGoogle Mapsbahoakatolo-kevitra fikarohanaserpsWhole Foods Marketaotra-Click
Mick Wilson, filoha lefitry ny fahombiazan'ny mpanjifa ao amin'ny Rio SEO. Mick dia matihanina amin'ny marketing mifandraika amin'ny traikefa 15+ taona amin'ny Digital, CRM ary Local Marketing. Izy no mitarika ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifa ao amin'ny Rio SEO, ary efa niaraka tamin'ny orinasa hatramin'ny nanombohany.
Aiza no tokony hametrahanao ny ezaka ataonao amin'ny 2020?
Fahatakaran'ny mpanjifa amin'ny vanim-potoana niomerika